Boqor Burhaan Boqor Muuse oo baaq u diray ganacsatada Puntland[Video] | SAHAN ONLINE
BOOSAASO – Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa ugu baaqay ganacsatada Puntland iney dib u furan meheradaha ganacsiga taasoo saddexdii maalood ee u dambeysay xirnaa.
Ganacsatada Puntland ayaa ka cabanayay khidmado la sheegay in lagu kordhiyay badeecadaha kasoo dega Dekeda magaalada Boosaaso.
Boqor Burhaan oo soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa waxaa si ballaaran usoo dhaweeyay qaar kamid ah Isimada gobolka Bari,cuqaal,nabadoono,ganacsato,culuma’udiin,dhalinyarada iyo haweenka magaalada Boosaaso.
Boqorka oo u yimid Boosaaso sidii uu uga qeybqaadan lahaa xalka loo raadinayo muranka iyo is-afgaran waaga ka taagan heshiiska Dekadda Boosaaso iyo khidmadaha lagu kordhiyay qaybo kamid badeecadaha kasoo dega Dekadda Boosaaso.
Boqor Burhaan ayaa sheegay in uu rajaynayo in maamulka Puntland uusan ka hor imaan doonin wixii danta iyo wanaaga Ummada iyo dalka ku jiro,sidoo kalena wuxuu u mahadceliyay Isimadii iyo Waxgaradakii ku howlanaa sidii xal looga gaari lahaa muran jira.
Waxaa inoo dhiman oo kaliya inay danta iyo maslaxada ummada u wada jeesano, Dekedu inay inoo furanto,magaalada sideedii inaynu ku soo celin, ganacsigu in sidiisii iyo si ka wanaagsan inoo noqdo” ayuu yiri Boqor Burhaan Boqor Muuse
Boqorka soo dhaweynta boqorka waxaa kaloo ka hadlay Guddoomiye K/xigeenka gobolka Bari Axmed Cali Cabdullaahi (Cirro) , Ganacsade Liibaan Dheere iyo qaar ka mid ah isimadda gobolka Bari. Dhammaantood waxay tilmaameen inay rajo weyn ka qabaan in xal laga gaaro dhibaatada Dekeda.